हामी यहाँ छौं भन्दै, संसद बिघटन बिरुद्ध दाहाल-नेपाल समुह पुग्यो माईतीघर हेर्नुहोस् ! (तस्वीरमा) | suryakhabar.com
अब एमाले एकताको सम्भावना छैनः वरिष्ठ नेता नेपाल
ट्राफिक प्रहरी आह्वान गर्दै भन्छन्ः ‘अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ ’
Home तस्विरहरु हामी यहाँ छौं भन्दै, संसद बिघटन बिरुद्ध दाहाल-नेपाल समुह पुग्यो माईतीघर हेर्नुहोस् ! (तस्वीरमा)
हामी यहाँ छौं भन्दै, संसद बिघटन बिरुद्ध दाहाल-नेपाल समुह पुग्यो माईतीघर हेर्नुहोस् ! (तस्वीरमा)
on: १० पुष २०७७, शुक्रबार ११:१३ In: तस्विरहरुTags: No Comments
१० पुष, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारीसमा राष्ट्रपती विद्यादेबी भण्डारीले संसद बिघटन गरेको बिरोधमा सत्तापक्ष नै उत्रिएको छ । ओलीले संसद बिघटन गेको बिरोधमा बिबिध संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनीक गरेको नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल–माधव कुमार नेपाल समुहले आज काठमाडौंको माईतिघरमा आन्दोलन गरेको छ ।
माईतीघरमा जारी आन्दोलनका लागि अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल माधवकुमार नेपाल, आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठ, झलनाथ खनालसहितका नेताहरु मण्डला पुगिसकेका छन् । ओलीले जारी गरेको असंबैधानीक संसद बिघटन मान्दैनौं भन्दै जान्दोलन गरिरहेका छन् ।
ओलीले संसद बिघटन गरेपछि यतिबेला नेकपा दुई समुहमा विभाजीत भएको छ भने दुबैले आफुनै आधिकारीक भएको दाबी गरेका छन् । पार्टी फुटको घोषणा नगरेपछि दुई समुहमा बिभाजीत भएर बिभिन्न एकलौटि निर्णय गरेसंगै पार्टी टुक्रियको देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा ‘ख्रिष्टमस’को शुभकामना
साना लगानीमा खुलेका सञ्चारगृहको संरक्षणका लागि जोड
१० पुष २०७७, शुक्रबार ११:१३